प्रकाश सायमी संग ७ दिन | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: प्रकाश सायमी संग ७ दिन ★ अनुज कुलुङ★ प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ६, २०७०
लेखक : अनुज कुलुङ विधा/श्रेणी : संस्मरण रचना संख्या :3प्रकाशन मिति : शुक्रबार, बैशाख ६, २०७० अनुज कुलुङका अरु रचनाहरु “म लेख्छु । पढ्नको लागि लेख्छु । लेख्नको लागि पढ्छु । पढ्ने र लेख्ने काम आफ्नो मस्तिष्कलाई सोधन गर्नको लागि गरिरहन्छु ।” यो भनाइ प्रकाश सायमीको एक अन्तरवार्ताबाट साभार गरेको हुँ । यो भनाइलाई चिन्तन र मनन गर्ने हो भने सबै पाठकहरु लेख्न र पढ्न जागरुक हुन्छन् । ताकि लेख्न खोज्ने मान्छे पढ्न तम्सिएला । पढ्ने मान्छे लेख्न । विश्वकोष (इन्साइक्लोपिडिया) मानिने सायमी दाईसंग पोखरामा एकपटक फेरी भेट्ने अवसर मिल्यो । यो अवसर हिमालयन रिडर्स कर्नरको आयोजनामा तय भएको पुस्तक हस्ताक्षर कार्यक्रममा मिलेको हो । जुन कार्यक्रमको संयोजक म स्वयं आफु नै थिए । कला, साहित्य र सिनेमाको एक प्रखर ब्यक्ति सायमीको पहिचान संझनै नसकिने छ । मान्छे धेरै चकित हुन्छन् सायमी दाइको स्मरणशक्ति देखेर । मैले त्यो बसाइमा धेरैले उ हाँको त्यो खुबीको बिषयमा प्रश्न गरेको सुनेको छु । एक सञ्चारकर्मीले उहाँलाई एक औपचारिक कार्यक्रममा सोध्नुभयो कि “दाई यस्तो सक्सेस मन्त्र हामीलाई नि बताइदिनुहुन्छ कि ?” त्यस्तै एक पत्रकारले पनि आफ्नो स्मरणशक्ति बढाउन खाँस के खानुपर्छ ? भनेर प्रश्न गरेको देखेको छु । म आफै पनि उहाँको स्मरणशक्ति देख्दा चकित हुन्छु । सानो सानो कुरा पनि याद गर्न सक्ने खुबी सायमीलाई चिनाउने एक पहिचान हो जस्तो लाग्छ । हस्ताक्षर कार्यक्रम हामीलाई खासै भब्य राख्ने सोच भएन । भब्य कार्यक्रमको लागि भब्य खर्च गर्ने अवस्था हामीसंग थिएन । त्यसो त सायमी दाइको पुस्तकको परिचर्चा गर्न रेन्डम रिडर्स सोसाइटीले उक्त महिनाको अन्तिम दिन कार्यक्रम तय गरेको थियो । त्यस्तै रेडियो जननीको प्रशिक्षण पनि हुने भएकोले हाम्रा लागि हस्ताक्षर कार्यक्रम एक काम दुइ पन्था झै भो । एफएम, रेडियोमा सके जति सबैलाइ हस्ताक्षर कार्यक्रमको बारेमा जानकारी दिने प्रयाश गरे । चिने जानेको पत्रकार साथीहरुलाइ भनिराखे । एफएमको स्टेशन मेनेजर देखि चिनेको आरजे हरुलाई भन्न छुटाइन । प्रचार प्रसारमा फेसबुकले पनि राम्रै तरिकाले सहयोग ग¥यो । कार्यक्रम स्थल हिमालयन रिडर्स कर्नर (बुक सप) मै हुने भएकोले सञ्चालक साथी बिजय भण्डारीको मनमा कता कता अप्ठ्यारो भइरहेको मैले चाल पाइराख्थे । प्रकाश सायमीसंग अघिल्लो समयमा खासै भेट नभएको, उनी पहिले देखि ठुलो श्रोता भएको, ठाँउ आफैलाइ साँघुरो महशुष गरिराखेकोले सायमी दाइले के सोच्ने होला भन्दै मकहाँ आफ्नो मनको कुरा पोख्ने गथ्र्यो । तर मैले उहाँलाइ धेरै चिन्ता नगर्नु भन्दै सान्त्वना दिए । उक्त कार्यक्रमको लागि आफ्ना ग्राहकहरुलाइ फोन गरेर जानकारी दिन भक्ति थपलिया भण्डारी लागि परिरहिन् । बीच बीचमा कार्यक्रम तयारीको बारेमा प्रकाश दाइसंग कुरा भइराख्थ्यो । उहाँ हस्ताक्षर कार्यक्रमको एक दिन अगाडि नै आउने कुरा भो । कार्यक्रम चैत्र ३० गते शुक्रबारको दिन राख्ने निधो गरियो । कार्यक्रमको संयोजक भएकोले एक मनमा कति पो मान्छे आउला भोली भन्ने एक किसिमको उकुशमुकुश आफैलाइ पनि भइरहेको थियो । र पनि अर्को मनमा जे पर्ला पर्ला होइजाला नि भन्ने भान आफैलाइ दिदै उत्साहित हुदै गए । बिहिबारको दिन आउनुपर्ने उहाँले आउन नसक्ने कुरा फोेनबाट जानकारी दिनुभयो । शुक्रबारको पहिले उडानमै पोखरा झर्ने कुराकानी पक्का भएपछि ढुक्क परियो । मनमा एउटा आशा के थियो भने उहाँ बिहिबार आउनुभएसी एक दुइ वटा एफएमहरुमा अन्तरवार्ता दिएर हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी बढाउन राहत मिल्थ्यो कि भन्ने थियो । तर त्यो आशा आशामै सिमित भयो ।
चैत्र ३० गते बिहान आउनुभएको खबर पाएपछि म र बिजय जी माउन्टेन भिल्ला होटलमा भेट्न गयौ । फोनमा दाइले भन्नुभएको थियो कि “म सहित एकजना चर्चित उपन्याँसकार पनि आउदैहुनुहुन्छ ।” होटल पुगियो । भेट पनि भयो । त्यहाँ एक जना अर्को चिनेकै ब्यक्ति पनि फेला प¥यो । प्रवाशी नेपाली साहित्य समाजका अध्यक्ष बिश्वासदीप तिगेला । जसले गत बर्ष सर्वाधीक मदन पुरस्कार प्राप्त किताब झमक घिमिरेको “जीबन काँडा कि फुल” प्रकाशित गर्नुभएको थियो । मैले उहाँलाई निकै बर्ष अघि देखि नै चिनिराखेको थिए । उहाँकै पुस्तक “देश बोक्नुको पिडा” बाट । फेसबुकबाट पोखरा आउने खबर त्यो अघि नै पाएको थिए तर प्रकाश दाइसंग आउने चाहि सरप्राइज जस्तो भयो । तिगेला दाइ पनि साहित्यकार असफल गौतमको आग्रहमा संघर्षमा कलम साहित्य समाजको सम्मान कार्यक्रमको लागि पाल्नुभएको रहेछ । खाँस चाहि प्रकाश दाईसंग उपन्याँसकार धु्रबचन्द्र गौतम आउने कुरा रहेछ । तर उहाँ बिशेष कारणले आउन नसक्नु भएको जानकारी दिनुभयो । त्यहाँ केहिबेर कुराकानी भो । म हस्ताक्षर कार्यक्रमको कार्यक्रम संयोजक मात्र नभइ नाताबम डट कमको संवाददाता पनि भएकोले प्रकाश दाइसंग केहि अन्तरवार्ता लिने मन भयो । हुन त म ब्यवसायीक पत्रकारीता गर्ने पत्रकार थिइन र होइन पनि । तर यो बिषयमा मलाई इच्छा थियो । पर्यटन ब्यवसायी प्रेम कुलुङ को क्यामेरा मागेको थिए । खिच्नको लागि आफुसंग सीप नभएकोले उहाँसंग नै खिचिमाग्न सहयोग मागे ।
उहाँको साहित्य, कला र सञ्चारको बिषयमा केहि कुराहरु सोधे । सञ्चार क्षेत्रमा लगाउनुभएको योगदानको बारेमा बुझे । उहाँले यो भन्दा अघि निर्देशन गरेको चलचित्रको बारेमा सोधे । जल शाहलाइ एउटा मात्र चलचित्रमा अभिनय गराउनुभएको रहेछ । उहाँकै चलचित्रबाट उनको फिल्मी करियर सुरु भएको कुरा पनि थाहा पाए । राजेश हमालको चर्चित डायलग “हे…, साथीको लागि यो हात सलाम , दुष्मनको लागि यो हात फलाम” भन्ने सायमीकै फिल्म “पृथ्बी”बाट रहेछ । जुन डायलगबाट नै हमाललाइ चिन्ने प्रशष्त छन् । नारायण गोपालको जीवनीसंग सम्बन्धित चलचित्र चाँडै नै ल्याउनको लागि आर्थिक श्रोतहरु जुटाइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो । सञ्चार क्षेत्रको प्रबद्र्धनको लागि सायमी दाइ कहिले म्याग्दी, कहिले पोखरा, कहिले चितवन, कहिले बाग्लुङ र कहिले काठमाण्डौ भइरहनुहुन्थ्यो । “साम ए गजल”, “अजम्बरी गीत संगीत”, “कलिङ पोखरा” जस्ता अति लोकप्रिय कार्यक्रमको श्रोताले अहिले पनि कहिले काहि पोखराबाट दीपेन्द्र श्रेष्ठले कार्यक्रम चलाउदा त्यहाँको श्रोताले फोन गरेको जानकारी अन्तवार्तामा दिनुभयो । पछिल्लो पटक प्रबिधिको उच्च बिकासले गर्दा इबुकको बिकास भए पनि आफुलाइ चाहि किताब च्यापेर नै पढ्दा आनन्द आउने कुरा गर्नुहुदा म आफै पनि त्यो अन्तरवार्ताको समयमा आनन्दित भइरहेको थिए ।
बिश्वको सबैभन्दा महंगो पेन मोन्ट ब्लाँ को बिषयमा उहाँको किताब “बर्सादी दिनहरु” मा पढ्न पाएको थिए । त्यहि डटपेनबाट उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा आउने पाठकहरुको पुस्तकहरुमा हस्ताक्षर गरिदिने सोच बनाउनुभएछ । निकै उत्सुकताकासाथ पोखरामा त्यो पेन देख्ने सौभाग्य मिल्यो । मैले मोन्ट ब्लाँ देखेको त्यो दोश्रो पटक थियो । त्यो अघि म काठमाँण्डुमा जादा भारतीय अभिनेता देवानन्दले उहाँलाइ दिनुभएको पेन देख्न पाए । यसको मुल्य नेपाली पैतिस हजार देखि एक लाख तिस हजार माथि पर्ने रहेछ । यो कुरा सुन्दा हामी त्यहाँ बस्ने सबै चकित भइरहेका थियौ । यो पेन किन त्यति धेरै महंगो भन्ने बिषयमा उहाँले भन्नुभयो कि “यो पेनबाट उठेको केहि पैसा बिश्वका गरिब कलाकारको लागि सहयोग गर्छ” । दिउँसो ३ बजे कार्यक्रम राख्यौ । कार्यक्रममा दाइ आउनु अघि नै ७, ८ जना उपस्थित भइसकेका थिए । ३ः२० तिर उहाँ कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो । अनौपचारिक रुपमै भक्ति जी र बिजय जी ले खदाँ लगाएर स्वागत गर्नुभयो । कार्यक्रमलाई साहित्यकार बिश्वासदीप तिगेलाको उपस्थितिले अझ धेरै उचाइ दिइरहेको थियो । कार्यक्रममा सायमी दाइको पुस्तकहरु “गालिबको चिहान र अन्य कबिता”, “चलचित्र कला र प्रबिधि”, “नेपाली संगीतको एक शतक” , “शंकर– स्मृति”, “बर्सादी दिनहरु” बिक्रिका लागि थिए । धेरैले “बर्सादी दिनहरु” नै किने । “शंकर– स्मृति” किताब नपुगेर खल्लो महशुष गरियो । “गालिबको चिहान र अन्य कबिता” र “नेपाली संगीतको एक शतक” समग्रमा पाठकले मन पराइदिए । किनिदिए पनि ।
कार्यक्रममा धेरै चर्चित र नयाँ साहित्यिक पाठकहरु देख्न पाए । परिचय गरेर आफुलाइ पनि चिनाउने गतिलो शौभाग्य मिल्यो । रेडियो प्रस्तोता आरजु बिष्ट शल्यानी, गजलकार दुर्गा न्यौपाने, साहित्यकार असफल गौतम, पत्रकार तथा लेखक मनोज घर्तिमगर, कबि दुर्गा बहादुर शाह “बाबा”, समालोचक राजेन्द्र चापागाई “आहत”, साहित्यकार दीपक पराजुली, गीतकार शीतल गिरी प्राध्यापकहरु, युवा पाठकहरुको उपस्थितिले कार्यक्रम सफल भइरहेको महशुष गर्दै मनमनै मख्ख पर्दै थिए । करिब ६ बजे कार्यक्रम सकियो । कार्यक्रम सफल भयो । बेलुकि म पनि प्रकाश दाइसंगै माउन्टेन भिल्ला गए । खानपिन त्यहि भो । तर नेपाली खाना नभई उतै जापानको जनताले खाने खाना । जिबनमा पहिलो चोटी जापानीज भएर खाए । खानाको नाम सोधे । पहिलो पटक राम्ररी सुन्न सकिन । दोश्रो पटक सोधे, रामन भन्नुभए जस्तो लाग्यो । तेश्रो पटक सोध्ने आँट गरिन । उहाँले के सोच्नुहुन्छ होला “यति जाबो नाम पनि दीमागमा घुसाउन नसक्ने मान्छे । कस्तो स्मरणशक्ति नभएको बेवकुफ होला ।” यस्तै सोच्नुहुन्छ कि भन्ने मन भएर सोधिन । परिकार आयो । बंगुरको फलमासु र बोसो जस्तो पातलो ताछेर पकाइवरी एक पिस थुक्पामाथि देखे । तर त्यो पिस बंगुरकै हो कि अरु केहि को मैले बुझिन । केहि मरमसला हरिया सागपात संगै थियो । झोलपानी, थुक्पा, हरिया सागपात, मरमसला सबै राखेर तयार पार्दा रहेछन् त्यो खान्की । आपत प¥यो कि यसलाइ कसरी खाने ? पहिलो सुरुमा मैले खाइन । उहाँले खाएको हेरे । चम्चा थियो डाडु जस्तै प्लाष्टीकको । सामान्य चम्चाभन्दा केहि फरक र अलिकति सानो । त्यसले झोल खानुभएको हेरे । त्यसैगरी मैले पनि खान थाले । मिठो हुँदा रहेछ, त्यो नामै छिचोल्न नजान्ने जापानीज खाना । त्यो खाना दोश्रो दिन दीपक पराजुली(साहित्यकार) संग पनि खाइयो । दीपकजी मासु नखाने साकाहारी पर्नुभयो । उहाँले त्यहि खाना भेजमा खानुभयो । नाम भने उहाँलाई पनि याद भएन रहेछ । पछि मसंग “त्यो हामीले सायमी दाइसंग खाएको खानाको नाम के रे ? राममाया समथिङ के हैन ?” म चाहि जान्ने भएर उत्तर दिनेभए “ काँ हुनु त्यो त रायमन हो ।” तर मेरो पनि नाम त मिलेन रहेछ । खास त्यो जापानीज खानाको नाम रहेछ रेयमन÷ रेमन ।
मैले भने “दाई जीबनमा पहिलो पटक यो खाना खाए।”
उहाँले भन्नुभयो “भाइको जीबनमा मसंगै हिड्यो भने जहिले नि पहिलो पटक नै हुन्छ ।” उहा कहिले पनि निराश भएको देखेको छुइन । अनुहार एकदम फ्रेस देख्छु । दुःख, बेचेइन टेन्सन केहि देख्दिन । हुन त यो एउटा जिउने कला होला । त्यो साँझ खाना खाए पछि उहाले फिल्मको कुराहरु सुनाउनुभयो । उहाले फिल्म बनाउनुभन्दा अगाडि बनेको फिल्महरु एकदमै गाउले भावको मात्र फिल्महरु बन्थ्यो त्यो पनि अति नै कम । खिच्ने कलाको बारेमा उहाँले आफ्नो अनुभुति सुनाउनु भयो । पुरानो फिल्ममा बोल्ने डायलगहरु सुनाउनुभयो । पक्कै पनि त्यो सुनिरहदा नेपाली फिल्मको बिकास निकै नै भएको रहेछ ।
दोश्रो दिन म र साहित्यकार मित्र दीपक पराजुलीसंग भेटघाट गर्न गयौ । उहि माउन्टेन भिल्ला मै । कफि खान आग्रह गर्नुभयो । नखाने कुरै भएन । त्यो पनि प्रकाश सायमी दाइसंग । त्यो बसाइ अबिष्मरणीय रह्यो मेरो लागि । साहित्यको कुरा बढि भयो । त्यसपछि प्रकाश दाइको नारायण गोपालसंग बितेका रमाइला क्षणहरुको कुराकानी सुन्न आत्तुर थियौ । “बर्सादी दिनहरु” मा एउटा लेख छ । “लेखकको खोजीमा” भन्ने । त्यो लेखमा इन्द्र बहादुर राईले आफुलाइ मन पर्ने पुस्तक “रबर” रहेको कुरा एउटा अन्तवार्तामा दिनुभएछ । त्यो पुस्तक खोजी गर्दै जादा खाँस राब्ब ग्रियको “इरेजर” भन्ने रहेछ । त्यो पुस्तक अहिले सम्म नि फेला पार्नु भएको रहेन छ । त्यो पुस्तकको चर्चा भयो । त्यहि बसाइमै इन्द्र बहादुर राईको “आज रमिता छ” को बारेमा पनि खुब कुरा गरियो । आफुले त नढाटी भन्ने हो पुस्तक नै पढिएको छैन । यसको एउटा कारण छ, बुझ्न नसकिने भएर । किनकी मैले शंकर लामिछानेको “एब्यस्ट्रयाक्ट चिन्तन र प्याज” पढ्दा पनि केहि नबुझेर बुझ्न नसकिने किताब भनेपछि पढ्न मन नै हुदैन । सामान्य भाषा मात्र म बुझ्छु । साहित्यिक कठिन शब्दहरु म छिचोल्नै सक्दिन । नबुझेको शब्दहरु शब्दकोषमा हेरिराख्ने मेहनत ममा अझै पलाएको छैन । तसर्थ एउटा किताबमा कृष्ण धरावसीले त “आज रमिता छ” आजसम्म पनि धेरै जना पाठकहरुको लागि रमिता नै भएको छ भनेर भुमिका लेखेको छ । त्यो भुमिकाबाट डराएको थिए । एक जना पाठकले ५७ पटक पढेको कुरा सायमी दाइले सुनाउनुभयो । झन् पो झस्किए । सायमी दाइले त्यो पुस्तकको कथाभित्र फिल्म बनाउने प्रस्ताव पनि इन्द्र बहादुर राईलाई राख्नुभएछ । तर उहाँले प्रस्ताब राख्नुअघि नै अरु कसैले मौका छोपिहालेछ । पैसा पनि एडभान्स दिइसकेको थिएछ । सायमी दाईले त्यो कथामा फिल्म बनाउने मौका चाहदा चाहदै पनि पाउनुभएन । तर उहाँले पछि भन्नुभयो “आज रमिता छ” जसरी भएपनि पढ्नै पर्छ । साहित्यमा लागेको मान्छेले । साहित्यमा रुचि लिएको मान्छेले । साहित्यमा करियर बनाउछु भन्ने मान्छेले । इन्द्र बहादुर राईले “आज रमिता छ” जस्तो अब लेख्न पनि सक्नुहुन्न होला । यसले गर्दा मलाई फेरी खिन्न हुन थाल्यो, “आज रमिता छ” नपढेर । मित्र पराजुली जीले पढ्नु त भयो रे । तर आधा मात्र । किनकी उहाँ पनि बुझ्न नसकेर । उहाँको बिषयमा मैले कुनै टिभी कार्यक्रममा देखेको झल्झल्ती छ । गीतकार कालिप्रसाद रिजालले आफ्नै आँखा अगाडि अरुको शब्दहरु रिसले च्यातेर फालेको देखेर झस्किएको कहानी सुनाउनुभयो । नारायण गोपालले कालिप्रसादलाइ त्यति नै खेर शब्द लेख्न आग्रह गर्नुभयो रे । त्रसित हुदै रिजालले पनि घर गएर रचना गर्नुभएछ । पछि सुसेल्दै कालिप्रसादकै घरमा उक्त गीत लिन जानुभएछ । कालिप्रसादले कोटको गोजीबाट गीत दिनुभयो । नारायण गोपालले गीत हेरेछ । केहि नबोलीकन नारायण गोपाल घरतिर लाग्नुभयो रे । त्यति खेर उनलाई गीत बनाउने मुड आएछ र बनाउनुभएको रहेछ । “झरेको पात झै भयो उदाष मेरो जिन्दगी” र “आँखा छोपी नरोउ भनी भन्नु ..” । नारायण गोपालले राम्रा कलाकारहरुलाई, प्रतिभावान ब्यक्तिहरुलाई सपोर्ट पनि गर्नुहुन्थ्यो । प्रकाश सायमी स्वयंलाई पनि पहिलो पटक उद्घोषकको रुपमा उभ्याईदिएर रु.५०० पारिश्रमिक समेत दिएको कुरा बताउनुभयो । त्यतिखेर को रु.५०० धेरै नै हुन्थ्यो । यो मैले बुझेको छु । भजनशिरोमणि भक्तराज आचार्यलाई गायन करियरमा ल्याउन मदत पुयाउने मान्छे पनि नारायण गोपाल नै रहेछ । जुनबेला रेडियो नेपालमा नारायण गोपाल महाप्रबन्धकको रुपमा काम गर्दै थियो । नारायण गोपालको त्यो रमाइलो प्रसंगहरु सुन्दा लाग्छ कि म साह्रै अभागी रहेछु । किनकी नारायण गोपालको निधन म जन्मिनु ठिक एक बर्ष अगाडि भएको हो । अहिले लाग्छ कि यो संसारमा म नै रहेछु ढिलो जन्मने । यस्तै अर्को एक हस्तीको कुरा पनि गजबले भयो । उनी थिए बच्चुकैलाश । बच्चुकैलाश मैले प्रत्यक्ष अझै पनि देखेको छुइन । अब त देख्न पनि पाउदिन कि जस्तो लाग्छ । यो पनि मेरो लागि दुर्भाग्यको कुरा भनौ या के । उहाँ आफ्नो श्रोतालाई भेट्नै नरुचाउने गायक तथा संगीतकार हुनुहुदो रहेछ । एक जना बडो राम्रो गाउने संगीतकर्मीलाइ भेटाउन भनेर बच्चुकैलाशलाई आग्रह गर्नुभएको रहेछ प्रकाश दाइले तर बच्चुकैलाश मेरो अलि काम छ भनेर टारिदिनुभयो रे । एक पटक होटलमा बच्चु कैलाश गाडि पार्किङ गर्ने ठाउ नभेटेर हत्तु भइरहेको थिएछ, त्यति नै खेर प्रकाश सायमी आफ्नो पार्किङ गरेको गाडि निकाल्दै गर्दा बच्चुकैलाशले देखेछ र भनेछ “ए प्रकाश भाई तपाइको निकाल्ने हो ? म पार्किङ गर्नुप¥यो” प्रकाश दाईले पनि मौकाको चौका हान्न खोज्नुभएको थिएछ “ दाई पार्किङ गर्न त म दिन्छु तर एउटा शर्तमा म तपाइको फ्यानसंग भेटाउछु ।” यो सुन्नेबित्तिकै बच्चुकैलाश “ए भो भो छोड्देउ” भन्नुभएछ । यो सुन्दा खेरी बच्चुकैलाश कस्तो गायक होला ? आफ्नो श्रोतासंग किन भेट्न यति हिच्किचाउनुहुन्छ । अचम्म छ । आजकलका हामीजस्ता दुइदिने गायकहरुभन्दा कोषौ फरक बच्चुकैलाशको कुरा पनि पहिलोपटक सुन्ने मौका पाइयो । दीपक जंगमको कुरा पनि गरियो । दीपक जंगमको संगीत सुनेर पाकिस्तानी गजल गायक मेहदी हसन समेत भेट्न खोजेको रहेछ । पछि नेपाली गीतहरुलाई नै उर्दुमा अनुवाद गरेर दीपक जंगमकै संगीतमा करिब ३० वटा जति मेहदी हसनले रेकर्ड पनि गराएछ । त्यो गीत मैले चाहि सुनेको छुइन । सुन्ने शौभाग्य चाँडै नै मिलाउदै हुनुहुन्छ प्रकाश दाइले ।
गायक सोनु निगमलाई फिल्ममा गीत गवाउने एक ब्यक्ति हुन् प्रकाश सायमी । तर जे जति भने पनि भारतीयन ति गायकले आफुलाई फिल्ममा गवाउने ब्यक्ति नेपाली हुन् भनेर कहिले पनि भन्न सकेनन् र भनेनन् पनि । रु.१५,०० दिएर त्यो गीत गाउने अवसर पाएका ति गायकले “उकाली ओराली गर्दै,आँखाभरी रहर भर्दै” गीत गाएपछि हिन्दी फिल्महरुमा गीत गाउन अवसर पाएका ति गायकले नेपालीको त्यो धर्मलाई कहिले पनि सम्झेनन् । उदीत नारायण, मुरलीधर, कुमार कान्छा र प्रकाश सायमी । चार जना संगै बसेर संघर्ष गरेका थिए भारतमा । त्यो चलचित्र क्षेत्रमा पनि , गीत संगीतको क्षेत्रमा पनि । गीत गाउने ठेक्का मिलाउथ्यो रे उदित नारायण, जुन मृत्यु शोकशभाहरु हुन्थ्यो रे । प्रकाश सायमी त राम्रै परिवारको मान्छे । भारतमा निकै दुःख गर्न पयो । “यस्तो ठाउँमा किन ल्याएको यार ?” भनेर प्रकाश सायमीले एक दिन उदितलाई भन्नुभएछ । त्यो दुःख हेरेर उदीत नारायण आफ्नो दाहिने हत्केला निधार अगाडि ठडाएर भन्ने गथ्र्यो रे । “वा, सायमी साप । हामी तो रेडियो नेपालमा छदा पनि टेबुलमुनि सुतेर रात कटाइन्थ्यो । यहाँ पनि यस्तै । मलाई केहि फिकर छैन ।” यो सुन्दा लाग्छ कि आजकल दुइ दिनमा उदित नारायण बन्न खोज्नेहरु के कस्ता दुःख गरिराछन् होला । आज उदित नारायण त्यतिकै यो स्थानसम्म आएका रहेन छ भन्ने प्रष्ट बुझियो । दीपा झाको सहयोग र उनको गड गिफ्टेड गलाले उनलाइ निकै फाप्यो र अहिले लेजेन्ड छ त्यो आवाज ।
पोखरामा एक बेकरी निकै नै चर्चित छ । त्यो बेकरीमा उहाँको मन पर्ने कफि मोकाचिनो र क्यापाचिनो कफि चाहि पटक्कै पाइएन । एउटामा गयो, त्यहाँको सम्बन्धित ब्यक्तिले अर्को शाँखामा मात्र छ भन्थ्यो । अर्कोमा गयो मेसिन त हामी कहाँ छैन अर्को शाँखामा मात्र छ भन्ने गथ्र्यो । आँखिरमा मोकाचिनो र क्यापाचिनो कफि खान पाइएन । त्यो छुट्यो । आफु बिकट ठाउँको साधारण मान्छे भएको हुँदा त्यस्तो कफि खाने मान्छेको संगत त्यो अगाडि नपाएकाले अनबिज्ञ नै भइयो । यसरी हामी कफिको कहिले कफिको खोजी गर्दै दिनको बेलुकिपख भेटघाट गयौ । उहाँ रेडियो जननीको प्रशिक्षण पछि सिधै मलाइ समय छुटाउनुहुन्थ्यो । मेरो साथमा बिजय जी र दीपक जी पनि संगै पर्नुहुन्थ्यो । करिब ७ दिन बिताउनुभयो पोखरामा । हस्ताक्षर कार्यक्रम, “बर्सादी दिन” पुस्तक चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम, अन्य एफ एम तथा संस्थाको बिशेष आतिथ्य, रेडियो प्रशिक्षण कार्यक्रम लगायत मेरो भेटघाटमा बिताउनुभयो । उहाँको त्यो महत्वपुर्ण समय मेरो लागि अर्को महत्वपुर्ण भएर ठहरियो । धेरै सिक्ने मौका मिल्यो । उहाँको पुस्तकको हस्ताक्षर कार्यक्रमको संयोजक बनेर काम गर्न पाउदा गर्वान्वित भए । उहाँले बोल्ने बोली, उहाँले रचना गर्ने गीत, उहाँको निवन्धबाट धेरै प्रभावित छु म । जानेबेला उहाँलाइ बिदाइ गर्ने मौका चाहि मिलेन । जाने दिनको अघिल्लो दिन बिहानै पहिलो उडानमै जाने कुरा गर्नुभएको थियो । तर फेरी पछि त्यो उडान क्यान्सिल गरेको रहेछ । उहाँलाइ गोरखाको कार्यक्रममा जसरी भए पनि आउनुपर्छ भनेर फोन गरेछन् । त्यो खबर मैले नपाएकोले बिहानै ७ः३० बजे म पोखरा बिमानस्थल पुगे । ८ बजेसम्म कुरे । उहाँहरु कोहि पनि आउनुभएन । पछि फोन गरे । उहाँ त दमौली पुग्न लागिसक्नुभएको रहेछ । म त फेरी अर्को चकित खाए । पछि गोरखाको कार्यक्रमको ब्यथा सुनेपछि मनमनै सम्झे । सायमी साहब जस्तो अरु को होला । जहाँ पनि उहाँकै माग छ । यति महत्वपुर्ण ब्यक्ति कति जना होलान् यो नेपालमा । इन्साइक्लोपिडिया त्यतिकै भनेका हैन रहेछ । आफुमा भएको ज्ञान बाड्दै अरुलाई पनि माथि उठाउन प्रयाश गर्ने मान्छे, आफ्नो श्रष्टालाई सम्मान गर्ने मान्छे प्रकाश सायमी । त्यसपछि म फर्के अलि निराश भएर । तर शुभकामना र दिर्गायुको कामना दिइराखे । मेरो महत्वपुर्ण ब्यक्ति प्रकाश सायमीलाई । –अनुज कुलुङ
प्रकाश सायमी, बर्सादी दिन र म ।
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : संस्मरण: खिच्न नसकेको फोटो हनी पफ संस्मरण : युद्दभूमी इराकको यात्रा मध्यरातमा चौराह देखि क्याम्पसचोकसम्म छालमा रुझेकी उ नाब्रानमा गर्मी याम – सागओल अजरबैजान छोक सागओल दोस्तलार मेरो प्यारो ओखलढुंगा नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com